Tababaraha FCP 7 - Isticmaal Titles iyo Text Like Pro!
Tababarka FCP 7 - Abuurista Titles iyo Isticmaalka Qoraalka
Dulmar Titles iyo Text With FCP 7
Haddii aad isku dardar geliso xasuusin muhiim ah oo ku saabsan isugeynta qoyska ama ka shaqaynta dokumentiga dhererka leh, cinwaannada iyo qoraalka ayaa ah furaha lagu siinayo aragtidaada adiga oo ku siinaya macluumaad ku filan si ay u fahmaan dhacdada.
Tababarka talaaba-tallaabada ah, waxaad baran doontaa sida loo qoro qoraalka, saddex-meelood meel, iyo koobab adigoo isticmaalaya Final Cut Pro 7.
Albaabka ugu weyn ee isticmaalka qoraalka FCP 7 wuxuu ku yaalaa daaqada Viewer. Raadi calaamad muujinaysa "A" - oo ku taal geeska hoose ee midig. Markaad u socotid liiska qoraalka, waxaad arki doontaa liis ay ku jiraan Hoosaad Sadexaad, Qoraalka Dhageysiga, iyo Qoraalka.
Mid kasta oo ka mid ah xulashooyinkaa waxay yeelan karaan codsiyo kala duwan oo ku xiran filimkaaga. Sadex meelood saddex meelood waxaa loo isticmaalaa in lagu soo bandhigo sheeko ama sheeko wareysi ah oo ku saabsan dukumeentiga, iyo sidoo kale barista kumbiyuutarrada wararka iyo bandhigyada telefishinka. Qoraalka qoraalka ayaa badanaaba loo isticmaalaa dhibco dhammaadka filim, ama si loo soo bandhigo astaamaha filimka, sida ku jirta taxanaha caanka ah ee filimka Star Wars. Qodobka "Text" wuxuu bixiyaa sheyga guud ee adiga kugu habboon inaad ku darto xaqiiqooyin iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mashruucaaga.
Isticmaalida Hoosaadyada Sadexaad
Si aad ugu darto mashruucaaga hoose-Sadexaad, u gudub liiska qoraalka daaqada Viewer, dooro sadex meelood hoos. Waa inaad hadda aragtaa sanduuqa madow ee daaqada Viewer ee lagu calaamadeeyay Qoraalka 1 iyo Qoraalka 2. Waxaad ka fakari kartaa sidan oo ah cajalad fiidiyoow ah oo ay soo saartey Final Cut kaas oo la gooyaa, la dhimi karo, loona dhimi karo isla sida fiidiyow ah ee aad ku duubtay sawirkaaga.
Si aad ugu darto qoraalkaaga sadex meelood meel hoose oo aad sameysid hagaajin, u gudub daaqada "Controls tab" ee daaqada Viewer. Hadda waxaad ku qori kartaa qoraalka aad doonayso sanduuqyada akhriya "Qoraalka 1" iyo "Qoraalka 2". Waxaad sidoo kale dooran kartaa fontkaaga, cabbirka qoraalka, iyo midabka font. Tusaale ahaan, waxaan isbeddelay baaxadda Qodobka 2aad oo ka yar yahay Qodobka 1 iyo sidoo kale waxay ku darsadeen asal adag, iyagoo u socdaalaya Taariikhda iyo xulashada Kalsoonida laga yaabo inay hoos u dhacdo. Tani waxay ku darsataa baraf yar oo ka dambeeya Sadex meelood meel hoose si ay uga soo baxdo muuqaalka sawirka.
Voila! Waa inaad hadda haysataa saddax meelood meel oo qeexaya sawirkaaga filinkaaga. Hadda waxaad ku dhigi kartaa saddex-meelood meel hoos u dhigta muuqaalkaaga adiga oo jiidaya fiidiyowga si aad u jadwalka timaha, oo u daadihin raadinta laba, kor ka ilaalinta fiidiyowga hadda jira ee aad rabto inaad sharaxdo.
Isticmaalka Isticmaalka Qoraalka
Si aad ugu darto qoraalka gawaaridaaga filinkaaga, u gudub liiska qoraalka ee Viewer oo dooro Text> Scrolling Text. Hadda u tag tabka xakamaynta xagga sare ee daaqada Viewer. Halkan waxaad ku dari kartaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad uga mid noqotid dhibcahaaga. Waxaad hagaajin kartaa goobaha sida aad ku sameysey saddexda meelood meel hoose, sida doorashada font, Hagid, iyo midab. Kantaroolka labaad ee hoos ku yaal ayaa kuu oggolaanaya inaad doorato in qoraalkaagu kor u kaco ama hoos u dhaco.
Ku dheji deymahaaga dhamaadka filimka filimkaaga, samee cajaladda fiidiyowga, oo riixo cayaar! Waa inaad aragto dhamaan qoraalka aad ku daray ku duub wareega shaashadda.
Haddii aad ubaahan tahay inaad ku darto qoraalkaaga filinkaaga si aad u siiso qofka daawadiyaha leh macluumaadka lagama maarmaanka ah ee aan ku jirin dhegeysigaaga ama fiidiyahaaga, isticmaal isticmaalka guud ee Qoraalka. Si aad u gasho, u gudub liiska qoraalka ee viewer oo dooro Text> Text. Isticmaal kantaroolyada isku midka ah ee kor ku xusan, ku qor macluumaadka aad u baahan tahay inaad ku darto, hagaajiso font iyo midabka, oo ku jiid jilbaha fiidiyowga ilaa Jadwalka.
Waad sii haysan kartaa macluumaadkaan adigoo ka dhigaya jadwalka kaliya ee fiidiyowga ah, ama waxaad ku dhejin kartaa muuqaalka asalka ah adoo ku dhajinaya laba jibbaar ka sareeya muuqaalkaaga. Si aad u kala jejebiso qoraalkaaga si aad uhesho dhowr xariiqyo kala duwan, riix halkan meesha aad rabto in weedha ay jebiso. Tani waxay kuu geyneysaa qaybta soo socota ee qoraalka.
Hadda oo aad taqaano sida loo qoro fiidiyowyadaada, waxaad awood u yeelan doontaa inaad la xiriirto qofka ku daawaday dhamaan waxyaabaha aan ku dhawaaqin dhawaaqa iyo sawirka kali!
6 Ciyaartoyda Muusikada Bilaashka ah ee loogu talagalay Qalabka Moobaylka iyo Kumbuyuutarada
Qalabka Caddaanka ah ee Bilaashka ah ee loogu talagalay Editing Music iyo Sound Recordings
Waa maxay Vimeo? Hordhac u ah Istaraatiijiyada Wadaagga Wadaagga
Sansa Clip Zip: Macluumaadka iyo Qeexitaannada
Sida Loo Beddelo Wargalinta MP3-ga ee VLC Media Player
HSPA iyo HSPA + loogu talagalay 3G Networks
Sida Loo Dhigayo Dhamaan Lifaaqyada laga soo Dhawaaqo Fariin Caddaan ah Hore ee OS X Mail
Sidee ProtonMail Network Helitaanka Boostada Bilaashka ah iyo Qarsoodi ah
Excel IYO AMA Meelo Shaqeynaya
Monoprice 10565 Qiyaasaha Nidaamka Wadahadalka
IPhone Music App Settings: SoundCheck, EQ, & Volume Limit
Waa Maxay Adeegga?
Heerka MP3 Dhibcaha: Waa Maxay Macnaheedu?
15 ka mid ah Raadiyaha ugu Caansan iyo kuwa Faa'iidada leh iyo Taleefanka iPad-ka
Sida loo abuuro Cart Shopping Cart oo leh PayPal
Dib-u-eegid: iRig Meelo Kombiyuutar Mini Dhexe
10 Waxyaabaha Hadda Halka Lahaa Thanks to Pokémon Go
3 Barnaamijyada Hufnaanta Hantida
Adobe Lightroom 2.0 ee Android ayaa hadda la heli karaa
Farqiga u dhexeeya Internetka iyo Webka
PS3 Console iyo Accessories Sawirrada
Assassin's Creed: Xoreynta Dib u Eegista PS3
Fahamka Sida loo Muujiyo Network Drive ee Windows XP
Kaararka Dhejinta ah ee Badan
Sida loola xiriiro Taageerada IncrediMail